Eny - sary famantarana sy hevitry ny nofy Windows. Diksionera nofy - Rakibolana Nofinofy
DIARYARY DREAM Tsara - Symbols sy dikany amin'ny nofy Windows
Eny - Symbols sy dikany amin'ny nofy Windows
W - Ny lanja
Eny - Windows
Divay - Manoratra
Atsipy vola ho any: Ny fanirianao sy ny fanantenanao
Endritsoratra famoronana, fahendrena, hevitra na fahalalana izay ao anatiny miandry fotsiny ny hikasihana.
Noho ny singa misy rano eto dia afaka maneho ny fihetsem-ponao izany, na angamba ny tsy fahatsiarovan-tena, izay ampidinin'ny nofinofinao tsara ny siny.
Loharanom-panasitranana. Ny lavadrano masina dia nibanjina ilay tany tany Eropa taloha. Ny olona marary dia handeha ho any amin'izy ireo ary handro amin'ny rano manantena ny fanahin'ny fantsakana fantsakana hanome famelomana.
Ny fahalavoana ao anaty lavadrano dia maneho hery na toe-javatra tampoka izay manosika anao hijerena lalina. Tandremo anefa, amin'ny dia toy izany fa aza adino izay misy ny tady mba hahafahanao miverina miaraka amin'ny zavatra hitanao soa aman-tsara.
Ny nofinofy momba ny fantsakana amin'ny ankapobeny dia misy rano. Ianaro daholo ny tandindona sy dikany amin'ny Element of Water mba hahafahanao handinika lalina ny dikan'ny nofinao!
( jereo Lycanthropy, Monsters, Wolf )
( jereo ny Torolàlana, Toerana )
( jereo Biby, Trondro, Rano )
Ny nofy momba ny trozona dia fambara mahery tokoa satria ny trozona dia biby taloha, manan-tsaina ary majika toy izany.
Ny manonofy momba ny trozona dia mety ahitana ireto tandindona sy heviny manaraka ireto:
Dia sarotra mankany amin'ny fanovana sy fahazavana toy ny tamin'ny tantaran'i Jona sy ilay trozona. Ny angano trozona mitovy amin'izany dia hita koa amin'ny kolontsaina hafa, izay mampitovy ny kibon'ity zavaboary ity amin'ny kalon'ny fanovana sy ny fahaterahana indray, na ny fanombohana.
Ny trozona milomano ao anaty rano lalina dia matetika no maneho ny fikarohanao manokana hahalalana bebe kokoa ny momba anao na izao rehetra izao.
Ny spout trozona dia karazana nofinofy na rivotra, izay tadiavinao ny fofon'aina, ary angamba fiatoana amin'ny fidobohana lalina ara-pihetseham-po na henjana. Raha tsy izany, io dia mety haneho ny famotsorana ireo hevitra sy angovo miabo.
Marika iray taratry ny herin'ny rano mamelombelona hamelombelona ny hevitrao, hitondra fandriampahalemana sy fanasitranana ary hamafana ireo faritra marokoroko amin'ny fiainana.
Ao amin'ny Norse, ny trozona dia manana herin'ny maizina samirery azy ireo, ary indraindray dia mitondra mpamosavy mankany amin'ny toerana halehany. Noho izany, ny fisian'ny trozona avy any amin'ny halalin'ny ranomasina dia mety hanondro fahalianana misongadina amin'ny, na fahaizana miaraka amin'ny asan'ny maizina.
Ny trozona dia manana sonar toy ny feso, izay mahatonga azy ireo ho mariky ny 'zavatra maneno' ary mahalala ny làlan'ny fiainana.
Ilay trozona humpback, manokana, dia maneho ny fahitana ny hiranao manokana; firindrana izay fitaratra ny fanahinao, indrindra momba ny fomba fifandraisanao amin'ny fifandraisana. Ny hiran'ny humpback dia miova isaky ny vanim-potoana fiompiana, maneho ny fiovan'ny tontolo iainana manodidina azy ( jereo Mozika ).
( jereo Fiara, Circle, Seasons )
Hetsika bisikileta amin'ny fotoana, indrindra ny fizaran-taona. Any India, Kali no nitondra ny Time Wheel izay mamaritra ny fiainana sy ny fahafatesana amin'ny zavatra rehetra. Any Gresy fahiny, ny trano zodiakaly 12 dia miorina manodidina ny kodiarana.
Amerikanina tera-tany: ny kodiarana fanafody izay maneho ny fitovian'ny zava-drehetra.
Raha tsy miraharaha na tapaka ny ampahany amin'ny kodiarana dia tsy mandeha tsara ny zavatra iray manontolo.
Mandala izay mitovy amin'ny maodely na modely kosmika izay mitazona ny fitambaran'ny fiainana-fahafatesana-fahaterahana indray, ny fiandohan'ny afovoany farany amin'ny ambaratonga akaiky sy manerantany. Izy io dia fanehoana lehibe ny rede 'toy ny ao anatiny, tsy misy.'
Ny herin'ny lahatra sy ny lahatra. Ny Etruscans sy ny Romana dia samy nanana andriamanibavy izay ny fanjakany no kodiaran'ny fotoana ny lahatra. Ao amin'ny Tarot, misy koa ny Wheel of Fortune izay manamarika ny fifandimbiasan'ny raharahan'olombelona sy manerantany.
Loharano fanaraha-maso sy fitsipika ( jereo Fiara ).
Tsingerina apetraky ny psyche mihetsika, miteraka fiovana anatiny, na hetsika ivelany.
( jereo Fitaovam-piadiana )
Raha ampiasaina hampielezana biby dia manonofinofy ity nofinofy ity mba hifehezana ny toetranao tsy dia nivoatra, voajanahary kokoa.
Fanitsiana haingana hahazoana fankatoavana na manampy handroso zavatra mialoha (oh: 'kapoka azy ho endrika').
Mety ho taratry ny nofinofy dominatrix, miankina amin'ny singa nofinofy hafa.
Fanetren-tena, sazy na fanararaotana. Moa ve mankany aminao avy amin'ny hafa izany, sa ny mifamadika amin'izany? Mitodika any aminao ve izany fahakiviana izany?
Hery miteraka. Amin'ny karazan-kolontsaina sasany, dia nokapohin'ny olona ny vokatra mba hijinjana ny vokatra.
( jereo Rivotra, Mozika, Rivotra )
Famantarana avy ao anaty izay mangataka ny fijerinao manokana, toy ny mety hisiokafanao taxi, na siokanao hampiatoana olona tianao hiresahana.
Fiampangana na fanamelohana olona iray izay mbola tsy voatazona ny andraikiny amin'ny toe-javatra iray (ohatra: 'mitsoka ny kiririoka aminy').
Fomba entina manavesatra enta-mavesatra, na taratry ny fifaliana (ohatra: 'siotio feo mahafinaritra').
Famotsorana na fampitomboana ny fahefana, ara-panahy manokana. Tamin'ny andro taloha dia nino fa ny mpamosavy dia afaka mitsoka ny rivotra.
( jereo Colony )
Amin'ny kolontsaina atsinanana, ny lokon'ny fahafatesana sy fisaonana.
Fahadiovana, toy ny fahazavana fotsy manadio an'ny fotoanan'ny New Age, ary ny fahazavan'Andriamanitra mahajamba ao amin'ny Baiboly.
Manarona lesoka na kilema, toy ny vita amin'ny fotsifotsy sy fotsy.
Alchemical: ny fanarahana hazavana fotsy amin'ny nofy dia dingana iray izay mitondra ilay mpanonofy amin'ny lalan'ny fiakarana mankany amin'ny fahadiovana.
mifanaraka ve ny pisces sy ny pisces
Vakio daholo Psychology loko sy ny dikan'ny loko ...
( jereo ala, tsorakazo, tsorakazo, hazo, ala )
Tandindon'ny fahalefahana sy fandeferana noho ireo rantsany marevaka.
Faniriana sy majika. Tongasoa willow taloha, tampon-kintana, ary nentin'i Helice andriamanibavy grika dia tandindon'ny cosmic mifandray mafy amin'ny volana, sikidy ary ny fomban-drazana Mistery.
Fialànan'ny fanaintainana. Amin'ny ankapobeny, ny hodi-kazo dia soloina aspirinina.
Ny hazomalahelo mitomany dia maneho alahelo na alahelo manokana. Tadidio ny lesona momba ny hazomalahelo, na izany aza, dia mampiseho antsika koa ny fomba miondrika nefa tsy tapaka. Aza avela hahakivy ny alahelo ny alahelo.
( jereo Air, Fan, Whist )
Ianaro daholo ny tandindona ara-panahy sy dikan'ny The Element of Air amin'izay ianao hahafantatra tsara kokoa izay ambaran'ny nofinao momba ny rivotra.
Ny manonofy momba ny rivotra / rivotra dia mety ho ireto dikanteny an'ohatra ireto:
Ny rivotra mahery na ny tafiotra mahery dia manambara hery mahery miasa amin'ny fiainantsika, ny sasany amin'izy ireo dia mety hiteraka fisafotofotoana momba ny lalana sy ny lalanao.
Ny fanovana sy ny fivezivezena, izay matetika mifanena amin'ny korontana alohan'ny hisian'ny fiovana tsara.
Famantarana ny fahaizan'ny saina mientanentana mivoatra.
Amin'ny teolojia kristiana, ny fisian'ny Fanahy Masina.
Ny rivotra mahatezitra dia matetika no heverina ho mariky ny faharatsiana na ny tsy firaharahiany. Mariho fa i Losifera dia antsoina hoe Andrian'ny herin'ny rivotra, ary ny demonia ao Koran dia mifehy ny rivotra mahery ( jereo Monsters ).
Rivotra mierona: Amin'ny tantaram-pirazanana, io dia mampiseho fahoriana eny amin'ny faravodilanitra, na fanahy tsy milamina ( jereo Ghost ).
Ny fahagola dia tandindon'ny toetra maha-lahy, miaraka amin'ireo làlana efatra lasa kodiarana na lakroa voajanahary izay lasa toetr'andro.
Ny vanim-potoana misy ny toetrandro izay mampiseho ny làlan'ny rivotra mitsoka dia tandindona iray hafa amin'ny kodiarana sy ny lakroa, izay manondro ny loharanon-kery na olana.
( jereo Fonenana, Trano, Castle, Curtains )
Miseho ve misokatra, mihidy na mihidy ny varavarankely ao amin'ny nofinao? Ny fahazoanao miditra io fanokafana io dia manondro ny fisokafanao tena amin'ny maha-olona anao.
Tamin'ny tantara teo alohany dia nisokatra ny varavarankely mba hamelana vintana vaovao miaraka amin'ny tsio-drivotra sy ny voka-dratsy. Mila fanovana hafainganam-pandeha ve ianao, na fomba fijery vaovao?
vehivavy homamiadana sy pisces lehilahy eo am-pandriana
karazana nofy inona eo
vehivavy virgo sy pisces lehilahy eo am-pandriana